Izindaba - I-transformer isiqalile ukusebenza
1 Ngaphambi kokuqala ukusebenza, zonke izingxenye ze-transformer kufanele zihlanzwe futhi zesulwe.
2 Endabeni yokulawulwa kwe-voltage engekho umthwalo, ucezu oluxhumayo lukampompi olawula ukucindezela kufanele luxhunywe endaweni ehambisanayo ngokophawu ku-nameplate;
3 Ukuze uthole ukulawulwa kwe-voltage elayishiwe, sicela ubheke imanuwali yemiyalelo ye-voltage elawula ukushintshwa kwetap-voltage, bese usetha inani lokusetha ukuvikela okudlulele emshinini olawula amandla kagesi olayishwayo ngokuya ngesilinganiso samanje se-voltage ephezulu. ohlangothini.ifakwe enkonzweni.
4 Uma i-transformer ifakwe uhlelo lokulawula izinga lokushisa, sicela ubheke imanuwali yeziqondiso zedivayisi yokulawula izinga lokushisa.
5 I-transformer kufanele ivalwe futhi isetshenziswe ngaphandle komthwalo.Inani eliphakeme kakhulu le-inrush current evalayo lingafinyelela izikhathi eziyisi-8 kuye kweziyi-10 kunamanje olinganiselwe.
6 Ngemuva kokuthi zonke izinto zokuvikela seziqalile ukusebenza, i-transformer yenza ukushaqeka kokuvala okungalayishi izikhathi ezi-5 (ihlukene ngemizuzu eyi-10 isikhathi ngasinye), futhi akumele kube khona okungavamile.
7 Ngemuva kokuthi i-transformer isiqalile ukusebenza, umthwalo kufanele usuke ekukhanyeni uye esindayo, futhi uhlole ukuthi umkhiqizo unomsindo ongajwayelekile yini.Ungafaki umthwalo omkhulu ngokungaboni.
8 Ngemuva kokuthi i-transformer ingasebenzi, ngokuvamile ingaphinda isebenze ngaphandle kokuthatha ezinye izinyathelo.Kodwa-ke, uma izinga lokushisa eliphezulu futhi i-transformer ine-condensation, kufanele yomiswe ngaphambi kokuba i-transformer iphinde isebenze futhi.